सावधान ! तरकारीमा पनि छिर्दैछ मोन्स्यान्टो...... - NewsPolar NewsPolar
सावधान ! तरकारीमा पनि छिर्दैछ मोन्स्यान्टो……
१५ पुष २०७०, सोमबार १३:३२
काठमाडौं । हामीकहाँ कस्ता खालका आतंकहरु आईलाग्छन, सोच्नै भ्याइदैन । कहिले हलानो आतंक, कहिले फलानो आतंक त कहिले ढिस्कानो आतंक । आतंकै आतंकको भण्डार बनेको नेपालमा आजभोलि मोन्स्यान्टो आतंक छाएको छ । मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक प्रमाणित भइसकेका कृषि रसायन र बीउ विजन उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको बहुराष्टिय कम्पनी मोन्स्यान्टो नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको कुराले सरोकारवालाहरु त्राहिमाम् छन् । नेपालका राजनीतिक दल, सचेत कृषक, वातावरणविद् , संरक्षणकर्ता र मिडिया जगत मोन्स्यान्टो प्रवेशको विरोधमा छन् भने कृषि विकास मन्त्रालय सम्बद्ध केही अधिकारीहरु यसको पक्षमा उभिएका छन् ।
तरकारीमा समेत छिर्दैछ मोन्स्यान्टो
हामीकहाँ अहिले अमेरिकन बायोटेक कम्पनी मोन्स्यान्टोको मकैको बीउको विषयमा बहस चलिरहेको छ । तर मकै मात्र होइन तरकारीका जातमा पनि छिर्न खोजेको छ । यसतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन । काँक्रा, भण्टा, काउली र बन्दामा मोन्स्यान्टो छिर्दैछ । आफ्ना हानिकारक उत्पादनका कारण विश्वभर बदनामी कमाएको उक्त कम्पनीका हाइब्रिड अर्थात वणशंकर जातका तरकारीका बीउहरु परीक्षण गरी किसानलाई वितरणको लागि तयारी हालतमा राखिएको कृषि मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
यस्ता हाइब्रिड बीउ खरिद गर्दा मोन्स्यान्टोका हुन कि अरुका भन्ने विषयमा किसानहरुले खासै चासो राख्दैनन् । तर यसरी पर्याप्त जानकारीविना जथाभावि बीउ खरिद गर्नु निकै जोखिमयूक्त हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
मोन्स्यान्टो मकैका ५ जात सूचीकृत
नेपालमा मोन्स्यान्टो मकैका ५ वटा जात सूचीकृत गरिएको कृषि विकास मन्त्रालय बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म बहुुराष्ट्रिय कम्पनीका ३४१ बीउहरु सूचीकृत गरिएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३४१ जातमध्ये धानका १७, मकैका ३२ र तरकारीका २९२ जातहरु छन् ।
सूचीकृत गरिएका मोन्स्यान्टोका मकैका हाइब्रिड बीउहरुमा सुपर ९०० एम, डिकेसी ७०७४, डि के सी ९०८१, अलराउण्डर रहेका छन् । व्यापक विरोधका बाबजुत सरकारी अधिकारीहरुले मोन्स्यान्टो बीउको गोप्य परीक्षण गरी किसानहरुलाई वितरण समेत गरिसकेको रहस्य खुलेको छ । यसरी परीक्षण गरिएको कुरा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कलाई समेत जानकारी नदिएर रहस्यमय ढंगले परीक्षण गरिएको सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी परीक्षण गरिएका मोन्स्यान्टो मकैका हाइब्रिड बीउ बारा र पर्साका किसानहरुलाई वितरण पनि गरिसकिएको छ । अहिलेसम्म उक्त बीउबाट राम्रै उत्पादन प्राप्त भएको किसानहरुको प्रतिक्रिया पाएको सरकारी अधिकारीहरु दाबी गर्छन ।
२ वर्षअघि बारामा घोगा नलागेको मकैको बीउ मोन्स्यान्टो कम्पनीकै भएको बताईन्छ । तर अधिकारीहरु यो कुरा स्वीकार गर्दैनन । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. केशवबाबु कोइराला भन्छन् ‘त्यो मोन्स्यान्टोको बीउ थिएन, बरु नेपालमा सूचीकृत नभएका बीउहरु किसानहरुले जथाभावि प्रयोग गरेको पाईयो ।’
धेरैजसो किसानहरुलाई त यस्ता विषयहरुमा जानकारी पनि हुँदैन । बीउ कस्तो किन्ने, कहाँ किन्ने, कुनको असर प्रभाव के छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र बीउ किन्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि धेरैजसो किसानहरुमा छैन । त्यसो त कुन बीउ कस्तो प्रकारको हो भनेर छुट्टयाउने प्रयोगशाला समेत नेपालमा छैन । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. कोइराला भन्छन् ‘बीउ परीक्षण गर्ने ल्याबको अभावमा जमिनमा रोपेर उमारेर मात्र परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ २०६८ सालमा बाराको डुमरवाना, निजगढमा क्षेत्रमा किसानले लगाएको मकैबालीमा घोगा नलागेपछि आन्दोलन भयो र सरकारले किसानहरुलाई २० करोड क्षेतीपूर्ति दियो । तर प्रयोगशाला निर्माण तथा यस विषयको अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । हाइब्रिड अनुसन्धानको लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको डा कोइरालाले बताए ।
फेरी सुरु भयो मोन्स्यान्टो विरोधी अभियान
२ वर्षअघि पनि नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएस एड मार्फत यसलाई भित्र्याउने खेल शुरु भएको थियो । २०६८ भदौ २६ गते कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको सक्रिय सहभागितामा ललितपूरमा सम्पन्न एक कार्यक्रमकै भोलिपल्ट अर्थात भदौ २७ गते यूएसएडले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर मकैको हाइब्रिड बीउ नवलपरासी, चितवन र काभ्रेका २० हजार कृषकलाई बाँड्ने सहमति भएको जनाएको थियो । यूएसएडले यसलाई नमूना परियोजनाका रुपमा शुरु गर्ने बताएको थियो ।
यसपटक फेरी सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा सीजी सिड्सले नेपालमा मोन्स्यान्टोको हाइब्रिड बीउ वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । यस विषयमा संचारमाध्यमहरुबाट धमाधम सूचना, विश्लेषणहरु आउन थालेपछि राजनीतिक दलहरु पनि झसंग भएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले आइतवारको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत मोन्स्यान्टो विरुद्ध छलफल भएको थियो ।
मुख्य राजनीतिक दल निकट किसान संघहरुले पनि मोन्स्यान्टोको बीउ प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल किसान संघका सभापति भानुभक्त सिग्देल मोन्स्यान्टोलाई नेपाल भित्र्याउन नुहुनेमा जोड दिन्छन । “हाम्रै परम्परागत बीउको संरक्षण गर्नुपर्छ, मोन्स्यान्टोको बीउ भित्र्याएपछिको जोखिमसँग सामना गर्ने क्षमता नेपालसँग छैन । यो राम्रो कुरा होइन ।” सरकारले मोन्स्यान्टो प्रवेशमा रोक नलगाए कडा हिसावले पेश हुने उनको चेतावनी छ ।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव डा. प्रेम दंगाल पनि मोन्स्यान्टो प्रवेशको सशक्त विरोधमा छन । नेपालको जैविक विविधता नष्ट गर्न कृषि मन्त्रालयले मोन्स्यान्टो भित्र्याउन लागेको उनको भनाइ छ । “मोन्स्यान्टो जस्तो किसानमारा कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याए त्यस्तो योजना ध्वस्त पार्ने दंगालले चेतावनी दिए ।
यस्तै एमाओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठ मोन्स्यान्टोलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल भित्रयाउन नहुने बताउछन । राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीहरुले षडयन्त्रमूलक ढंगले मोन्स्यान्टो भित्र्याउन लागेको श्रेठको दाबी छ । भन्छन “नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा परनिर्भर बनाउने गरी मोन्स्यान्टोलाई ल्याउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।”
२ वर्षअघि पनि नेपालमा मोन्स्यान्टो विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । २०६८ मंसिर ९ गते मोन्स्यान्टो विरुद्ध काठमाण्डुस्थित अमेरिकी राजदुतावास भवन अगाडि प्रदर्शन भएको थियो । सविन लिम्बु, बब्रिम केसी लगायतका यूवाहरुले त्यतिवेलाको आन्दोलन संगठित गरेका थिए ।
मोन्स्यान्टो भित्र्याउन २ वर्षअघि भएको प्रयासको विषयमा २०६८ पुस १५ गते प्रसारित रेडियो नेपालको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक प्रश्नकर्ताको जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए “मोन्स्यान्टोको विषयमा चर्चा भइरहेको छ । यस विषयमा म पनि चिन्तित छु । कुरा के रहेछ बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउछौं ।” के प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यतिबेला खुलेर भनेन् । त्यसपछि त्यसलाई रोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको पनि देखिएन ।
नेपालमा त हालसालैको कुरा भयो, सन् २००८ देखि नै विश्वभर मोन्स्यान्टो विरोधी आन्दोलनहरु चल्दै आएका छन् ।
मोन्स्यान्टो लगायत बहुराष्ट्रिय कम्नीका बीउविजनको प्रवेशमा रोक लगाउन आइतवार सर्वोच्चमा रिट समेत परिसकेको छ । अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्ता कम्पनीका बीउविजन प्रयोगले नेपाली किसानहरुको बीउमाथिको अधिकार समाप्त हुने भएकोले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद, बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारी धारणा के छ त ?
सरकारले भने मोन्स्यान्टो मात्र होइन कुनैपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बीउविजनको प्रवेशमा रोक लगाउन नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले शुक्रवार विज्ञप्ती निकालेर जिएमओ प्रवेश रोक्न उच्च सतर्कता अपनाईने तर हाइब्रिड रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको र इन्टरनेशनल ट्रिटी अन प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेज फर फुड एण्ड एग्रिकल्चर, कन्भेन्सन अन बायोडाइभर्सिटी लगायतका सन्धी सम्झौतामा सहमति जनाइसकेकोले हाइब्रिड बीउ प्रवेशमा रोक लगाउन नसकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
हानिकारक रसायन उत्पादनमा मोन्स्यान्टो
विसौं शताब्दीको आश्चर्यजनक उत्पादन मानिएको मोन्स्यान्टोको पि.सी.बी. नामक इलेक्ट्रिकल रसायनले मानिसको कलेजो र स्नायू प्रणालीमा गंभीर क्षती पु¥याएको प्रमाणित भएपछि सन् १९७१ देखि उत्पादनै बन्द गर्नुप¥यो । त्यस्तै मोन्स्यान्टोले नौसेनाको पानीजहाजमा प्रयोग गरिने पाइड्रउल १५० नामक हाइड्रोलिक फ्लुड, सन् १९५६ देखि बिक्री शुरु ग¥यो । तर त्यसको प्रयोगले पनि मानिसको कलेजो विगारेको प्रमाणित भएपछि मोन्स्यान्टोको नाममा उजुरी प¥यो र अमेरिकी नौसेनाले त्यसको खरिद नै बन्द गरिदियो ।
अमेरिकाले सन् १९६२ देखि १९७१ सम्म चलेको भियतनाम युद्धमा जनताका विरुद्ध प्रयोग गरेको एजेण्ट अरेन्ज नामक हानिकारक रसायन पनि मोन्स्यान्टोकै उत्पादन थियो
मोन्स्यान्टोको जालमा मेक्सिको
मेक्सिको मकैको जननी मुलुक मानिन्छ । ७ हजारवर्ष पहिले मध्यमेक्सिकोमा मकैको खेती सुरु भएको बैज्ञानिकहरुको अनुमान छ । मेक्सिकोबाटै विश्वका अन्य मुलुकहरुमा मकैको बीउ प्रसार भएको मानिन्छ । उक्त मुलुक मकैमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात समेत गथ्र्याे । तर अहिले मेक्सिको मकै आयात गर्ने मुलकको सूचीमा पर्दछ । यसको एकमात्र कारण मोन्स्यान्टोको घुसपैठ हो । मोन्स्यान्टोको हाइब्रिड र जिएमओ बीउ प्रयोग गरेपछि मेक्सिकोले यस्तो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । अहिले त्यहाँ मोन्स्यान्टोको सवैखाले उत्पादनमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
तीन लाख भारतीय किसानको ज्यान लियो मोन्स्यान्टोले
मोन्स्यान्टोले सन् २००२ देखि भारतका विभिन्न स्थानमा वितरण गरेको हाइव्रिड बीउ र विषादीको कारण हजारौं किसानका बच्चाहरुमा पक्षघात देखाप¥यो । मोन्स्यान्टोको बीउबाट उत्पादित खाद्यान्नको प्रयोगले मानिसहरुको मुख सुन्निने, ओठहरु हरियो भइ कलेठी पर्ने, कलेजो बिग्रने, गर्भ तुहिने, चाँडै बुढो हुने र स्वास प्रस्वास प्रणालीमा गंभीर समस्या देखिएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यतिबेला मोन्स्यान्टो इन्डिया लिमिटेडले, ग्रामिण क्षेत्रका सोझा किसानहरुको बुद्धि भुट्न सफलता पाएको बैज्ञानिकहरुको ठहर छ । चर्चित भारतीय वातावरण बैज्ञानिक बन्दना शिवा भन्छिन “विचरा ती निर्दोष किसानहरु एजेन्टको जालमा परे । उनीहरुले अमेरिकी कम्पनीको बीउ भन्ने वित्तिकै आँखा चिम्लेर विस्वास गरे, मोन्स्यान्टोका एजेन्टहरुले सोझा किसानहरुलाई नानाभाँतीका लोभ देखाएर फसाए तर केही वर्षभित्रै उनीहरु गरिखानु न मरिजानुको दोसाँधमा उभिन बाध्य भए, लाखौं किसानहरुले अन्ततः मुक्तिको उपायस्वरुप आत्महत्याको बाटो रोजे ।” मोन्स्यान्टोको बीउबिजन र विषादीको कारण भारतमा पछिल्लो एक दशकको अवधिमा करिब तीन लाख किसानहरुले आत्महत्या गरेका छन । मोन्स्यान्टोले हाइब्रिड बीउ सस्तोमा वितरण गर्छ तर त्यसको लागि चाहिने विषादी निकै महँगोमा किन्नुपर्छ । विस्तारै त्यसले काम गर्न छोड्छ र फेरी अर्को चाहिन्छ भन्छ, त्यो झनै महँगो पर्नजान्छ । त्यसपछि किसानहरु चर्को ऋणबमा कहिल्यै नउक्सने गरी फस्छन । यसैकारण भारतमा किसानहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको भारतीय बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । यस्तो अवस्थालाई भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले ‘सुसाईड इकोनोमी’ अर्थात आत्महत्याको अर्थतन्त्र नाम दिएका छन् ।
अमेरिकी प्रयोगशालाबाटै मोन्स्यान्टोका उत्पादनहरु गलत सावित
स्वयं अमेरिकी सरकारकै खाद्य तथा औषधि प्रशासनले सन् २००९ मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङकमा मोन्स्यान्टोको उत्पादन प्रयोग गरेका १० हजार मानिसहरु सदाको लागि अपाङ्ग भएको र १ सय भन्दा बढिको मृत्यु भएको उल्लेख छ । त्यस्तै अमेरिकन एकेडमी अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सले पनि सन् २००९ को जुनमा मोन्स्यान्टोको नाम नलिइकन अणुवंश परिवर्तन गरिएको खाद्यान्न प्रयोग नगर्न सार्वजनिक चेतावनी जारी गरेको थियो
विश्वव्यापी तिरस्कारको तारो मोन्स्यान्टो
मोन्स्यान्टोद्धारा उत्पादित बीउविजनहरु मानव तथा पशु स्वास्थ्य र वातावरणको लागि हानिकारक रहेको भन्दै सन् २००८ मा फ्रान्स लगायत कयौं यूरोपेली मुलुकहरुमा ठूलठूला प्रदर्शनहरु भए । सन् २०१० को अक्टुबरमा भारतमा पनि किसानहरुले मोन्स्यान्टोका उत्पादनहरुलाई सडकमा ल्याएर ओगो लगाउदै आक्रोस पोखे । यस्तै सन् २०१३ को मे १८ मा विश्वका ३०० सहरमा मोन्स्यान्टो विरोधी प्रदर्शनहरु भएका थिए । सन् २०१३ को मे २४ का दिन विश्वका ३०० वटा सहरमा एकैसाथ मोन्स्यान्टो विरोधी प्रदर्शनहरु भएका थिए । फ्रान्स, रुस, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, बुलगेरिया, अष्ट्रिया, जापान , हंगेरी, आयरल्याण्ड, मेक्सिको लगायत विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा मोन्स्यान्टोका उत्पादनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
के हो त यो मोन्स्यान्टो ?
आजभन्दा एक सय एघार वर्ष पहिले अर्थात सन् १९०१ मा अमेरिकी नागरिक जोन फ्रान्सिस् क्वीनीले आफ्नी पत्नी ओल्गा मोन्स्यान्टोको नाममा यस कम्पनीको स्थापना गरेका हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्स्यान्टोेले सन् १९४५ देखि कृषि रसायनहरुको उत्पादन शुरु गरेको हो । सन् १९८० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मोन्स्यान्टोलाई ६ सय ७४ वटा बायोटेक्निकल पदार्थको पेटेन्ट राइट्स अर्थात सर्वाधिकार दिएपछि यो अणुवंश परिवर्तित बिउ उत्पादन गर्ने विश्वको सवैभन्दा ठूलो कम्पनीमा परिणत भयो । सन् १९८२ मा भटमासको आणुवंशिक गुण परिवर्तनमा सफलता मिलेपछि उत्साहित भएको मोन्स्यान्टोले प्राय सवैजसो बालीको हाइब्रिड र अणुवंश परिवर्तित बीउ उत्पादन गर्न थालेको हो । सन् १९९४ मा मोन्स्यान्टोका बायोटेक्निकल रसायनहरु पोसिल्याक, बोभिन र स्म्याटोट्रोफिनले अमेरिकी सरकारबाट आधिकारिक मान्यता पाए । त्यतिवेलासम्म यो कम्पनी खराब उत्पादनका कारण विश्वभर बद्नाम हुँदैथियो । आफुमाथि लागेको कालो धब्बा मेटाउने उपायस्वरुप सन् २००० मा मोन्स्यान्टो सहित अरु ३ वटा कम्पनी मर्ज भइ यसको नाम समेत परिवर्तन गरियो र फार्मेसिया कर्पोरेशन राखियो । तर मोन्स्यान्टोको खराब आचरणका कारण त्यो गठबन्धन २ वर्षपनि टिक्न सकेन । मोन्स्यान्टो कम्पनी छुट्टियो र अहिलेसम्म स्वतन्त्र अस्तित्वमा संचालित छ । मोन्स्यान्टो कम्पनीले हाल विश्वका ७१ वटा देशमा आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित १८ वटाभन्दा बढी देशमा मोन्स्यान्टोका शाखा रहेका छन् ।
किन मरिहत्ते गर्छन सरकारी अधिकारीहरु मोन्स्यान्टो भित्र्याउन ?
मोन्स्यान्टोका उत्पादनहरुलाई विश्वव्यापी रुपमा बिकाउन यस कम्पनीले कुटनीतिक लविङ्गको लागि ठूलै धनराशी खर्च गरिरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन । विशेषगरी अमेरिकी दातृ निकाय र राजदुतहरु मार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने काम मोन्स्यान्टोले गरिरहेको छ । धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र भनिन्छ । उसको यो चलखेलमा हाम्रा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु पनि नपर्लान भन्न सकिन्न । मोन्स्यान्टो जस्तो बदनाम कम्पनीको आर्थिक र कुटनीतिक चलखेलमा सत्ताधारीहरु नफसून र देशलाई परनिर्भर एवं परजीवि बनाउनेतर्फ नलागून् भन्ने सवैको कामना छ ।
१५ पुस २०७०